06 / 10 / 2021 07 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 568 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်နှင့် The Hydra Stomper, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego Marvel, Marvel, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
04 / 10 / 2021 05 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 411 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဇာတျသိမျး, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, အသေးစား, သေးသေးလေး, နံရံကပျကျွွောငာ, ဆန်းစစ်ခြင်း, Thanos, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
30 / 08 / 2021 30 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 550 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Lego, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, သေးသေးလေး, စတား-သခင်ဘုရား, Thanos, T'Challa စတား - Lord, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
19 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 444 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Brick Fanatics YouTube ကို, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Marvel, Loki, Marvel, Spider-Man, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Throg, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, YouTube ကို, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
27 / 07 / 2021 03 / 08 / 2021 Matthew O'Shea 926 Views စာ 1 မှတ်ချက် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, 76107 Thanos Ultimate စစ်တိုက်, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, Avengers, ချစ်သူ, Drax, Gamora, Groot, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Marvel, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars, mantissa, Marvel, Nebula, reviews, ဒုံးပျံ raccoon, Star Wars, စတား-သခင်ဘုရား, အဆိုပါ Benatar, အဆိုပါ LEGO Group, Thor, တိုနီ Stark, UCS, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး
20 / 07 / 2021 20 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 657 Views စာ0မှတ်ချက် 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Gamora, Instagram ကို, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Minifigures, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, သေးသေးလေး, ကောလာဟလာ, ဆမ် Wilson, Thanos, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
09 / 07 / 2021 09 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 1354 Views စာ0မှတ်ချက် 76178 နေ့စဉ် Bugle, Avengers, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ကောလာဟလများ, Lego Spider-Man, Loki, Marvel, Peter Quill, ကောလာဟလာ, Scarlet စုန်းမ, Spider-Man, ကြယ်စင်သခင်, Sylvie, Thanos, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါ LEGO Group, Throg, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, Wanda, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်
09 / 07 / 2021 09 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 647 Views စာ0မှတ်ချက် 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Marvel, Marvel, Peggy ကို Carter, ပင့်ကူအဓိပတိ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, Thanos, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
23 / 04 / 2021 23 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1369 Views စာ0မှတ်ချက် Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Gamora, Lady Loki, Lego, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလများ, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, မော်နီကာရက်ဘို, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, ဆမ် Wilson, Scarlet စုန်းမ, Spider-Man, စတား-သခင်ဘုရား, စွန်ငှက်, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, Throg, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်, ဝှိုက်ဖြူ, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်